Sheeko sahameed: Faa’iidada xasilka iyo wax dhowrista | HimiloNetwork
Sheeko sahameed: Faa’iidada xasilka iyo wax dhowrista
Posted by: Zakariya in Kobciye October 15, 2015	0 320 Views
Muqdisho – Nin Beeraleey ah ayaa Maalin waxaa ka Luntay Saacadiisa oo Qiimo badan ugu Fadhiday, In muddo ah ayuu Saacadii Raadiyay, wuuna waayay.
Intaas ka dib Ninkii wuxuu arkay Caruur ku Ag Ciyaareysa Halki uu uga Shakiyay iney Saacadiisa uga Luntay, Caruurtii ayuu ku yiri:- Waxaa iga Maqan saacad Qofki soo hela wuxuu leeyahay Abaal marin Qaali ah.
Haddaba, Caruurti ayaa Saacadi ka Daaleen Raadinteeda oo wey ka quusteen, mid ka mid ah Caruurta ayaa wuxuu u yimid Ninki Beeraleeyda ahaa isagoo wada Saacadiisa, NinkiI ayaa ku yiri wiilki yaraa:- Sidee ku soo Heshay Saacada oo Asxaabtaada ku soo waayeen ?.
Wiilkii ayaa ku jawaabay:- Waxaan Fadhiistay meel gaar ah waxaan Dajiyay Maskaxdeyda, waxaana Dhegta u taagayay Shanqarta Saacadda, markaan Maqlay Shanqarteeda waxaan Bilaabay inaan ka Raadiyo Dhankii ay ka Shanqareysay sidaas ayaan ku soo helay.
Haddaba,waxaan Halkaasi ka Dareemeynaa iney Xasiloonidu ay tahay Shey Muhiim ah, oo loo baahan yahay qof walba inuu is dejiyo mar Alaale markey wax ka Lumaan, ama wax uu iloobay Rabo inuu soo Xusuusto, Fadlan Deji Maskaxdaada si ay u soo labato Xusuustaada.
(ALLOOW XUSUUSTEENA NOO XAFID).
Previous: Hindiya: Markuu gabowga 60-Jirka uu gabar 6-Jir ah guursado
Next: Markuu Maseyrku Miidaamo isku rogo
Muslimad Singapore ah oo degree-ga 1aad ee Jaamacadda ku heshay da’da 67-jirka
Nin isku tilmaamay argagaxiso oo loo diiday Dal-ku-galka Maraykanka.